थोरै तलब, उत्कृष्ट काम
रुस विश्कपमा पाँच अफ्रिकी टोली प्रतिस्पर्धामा छन्, तर अफ्रिकी मूलका प्रशिक्षक भने दुई जनामात्रै छन् । ती हुन्, सनेगेलका अलिउ सिसे र ट्युनिसियाका नाबिल मालोउल ।
विश्वकप समूह चरणका अन्तिम खेल आज (सोमबार)बाट सुरु हुँदैछन् । समूह ‘बी’ मा रहेको इरानले समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोर्चुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
रुस विश्वकपका केही रोचक तथ्य
फिफा विश्वकप सुरु भएको १० दिनमै केही रोमान्चक दृष्य देखिएका छन् । पहिलो खेलमै नयाँ टिमको शक्ति र शक्तिशाली टिम भनिएकाहरूको कमजोर प्रदर्शन देखिएका थिए । साविक विजेता जर्मनीको हारदेखि लिएर सबैभन्दा कमजोर भनिएको आयोजक रुसको चमत्कारिक खेलसमेत देखिएको छ । यस्तै ‘गोल मेसिन’ क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उत्कृष्ट लय र स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीमाथि बढेको दबाब पनि यही विश्वकपमा देखिएको छ ।
एउटा पुरानो मान्यता छ, ब्राजिलले विश्वस्तरीय गोलकिपर उत्पादन गर्दैन र सामान्य अवस्थामा उसलाई गोलकिपरको आवश्यकता पनि पर्दैन । तर होइन, एलिसन बेकरलाई हेरौं त, उनी एक ब्राजिलियन मात्रै होइनन्, सफल तथा विश्वका उत्कृष्ट गोलकिपरमध्यका एक हुन् । उनले पछिल्ला केही सिजनदेखि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् र फुटबलप्रेमीको मन जित्दै आएका छन् ।
फिफा विश्व कपको यस्तो क्रेज, जापानी फ्यानको व्यवहारबाट हर कोही अचम्मित
जापानी फ्यानमा फिफा विश्व कपको क्रेज यस्तो लागेको छ कि यो सँग सम्बन्धित एक अचम्मको मामला जापानको राजधानी टोकियोबाट आएको छ ।
भोकमरिको बालापन, अहिले स्टार विश्व कप फुटबलर
बेल्जियमका स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकूले तुनिसिया को बिरुद्धमा दुई गोल गरेर विश्व कप फुटबलमा सानदार सुरुवात गरेका छन् ।
यो एक सपना थियो
मेरी छोरी थोरै अचम्मकी छिन् । लगभग ६ वर्षको उमेरमा उनमा ‘लिटिल एटिट्युड’ विकसित भइरहेको छ । तपाईंलाई थाहा छ ? मेरी छोरी घरको चारैतिर दौडँदै गीत गाइरहेकी छन् । उनका पिताले भर्खरै म्यानचेस्टर सिटीबाट प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो, त्यो पनि १०० अंक जोडेर । के उनलाई त्यसको परवाह थियो ?
कोस्टारिकाविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने ब्राजिलको दाउ
स्विट्जरल्याण्डसँग १–१ को बराबरी खेलेको ब्राजिलमाथि कोस्टारिकालाई हराउनैपर्ने दबाब छ । समूह ‘ए’मा रहेको ब्राजिलले आइतबार स्विट्जरल्याण्डसँग बराबरी खेलेपछि निकै आलोचनासमेत खेपिरहेको छ ।
विश्वकपको भीएआर मनिटरिङ
यस पटकको विश्वकपमा प्रयोग गरिएका प्रविधिमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रविधि हो– भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) । कतिपय फुटबलप्रेमीलाई यो प्रविधि भर्चुअल रियालिटी (भिआर) हेडसेडबाट खेल हेर्ने प्रविधि हो कि भनेर कन्फ्युजन रहेको पनि पाइन्छ ।
विश्वकपमा प्रविधि : चिप जडित फुटबलदेखि फोरके र फाइभजीसम्म
प्रविधिले कुनै क्षेत्रलाई अलग रहन नदिएपछि विश्वकप फुटबल पनि यसबाट अछूतो रहने कुरै भएन । प्रविधिले विश्वकपका प्रसारक, आयोजक तथा दर्शकमाझ महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शन गर्दै आएको छ । विश्वकप २०१८ पनि यसबाट टाढिन सकेको छैन ।
मेस्सीविरुद्ध इभान राकिटिक
समूह ‘सी’ को दोस्रो चरणको खेलमा आज राति अर्जेन्टिना र क्रोएसिया एकअर्का विरुद्ध मैदान उत्रँदैछन् । यो केवल अर्जेन्टिना र क्रोएसियाबीचको मात्रै भिडन्त होइन, बार्सिलोनाबाट सँगै खेल्ने लियोनल मेस्सी र इभान राकिटिकबीचको प्रतिस्पर्धा समेत हो । मेस्सी विरुद्ध राकिटिकको भिडन्त नेपाली समय अनुसार राति ११ः४५ बजे सुरु हुनेछ ।
विश्वकपको पहिलो चरण : को उत्कृष्ट, को खराब ?
३८ गोल, बेल्जियम र इंग्ल्याण्डको सनसनीपूर्ण जित, स्पेन र पोर्चुगलको बराबरी, अर्जेन्टिनालाई नवप्रवेशीको चुनौती र विश्व विजेता जर्मनीको हार । यी विश्वकपको पहिलो चरणका खेलमा केही रोमाञ्चक तथ्यहरू हुन् । पहिलो चरणका खेल सकिँदा केही खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबैको ध्यान तान्न सफल हुँदा आशा गरिएका खेलाडीले भने खराब प्रदर्शन गरे ।
एडिसन यसरी बने पेले
स्विट्जरल्याण्डविरुद्ध १–१ को बराबरी खेलपछि आलोचना खेपिरहेको ब्राजिल आगामी खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ । सोहीअनुसार प्रशिक्षक टिटेले खेलाडीलाई तयार परिरहेका छन् ।
बुधवार, असार ६, २०७५
विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण रुसको राजधानी मस्कोमा चलिरहेको छ । यसको रौनक विश्वभर छाएको छ । यो रौनकमा नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन ।
विश्वकप फुटबलमा आज राति मोरक्कोले पोर्चुगलको सामना गर्दैछ । समूह ‘बी’ मा रहेका यी दुई टोलीबीचको नेपाली समय अनुसार साँझ ५ः४५ मा सुरु हुनेछ ।